प्रवास – Nepal24News
मलेसियामा एक नेपालीले इन्डोनेसियन प्रेमिकाको हत्या गरी शव दराजमा लुकाए
कोललम्पुर । मलेसियामा एक नेपालीले इन्डोनेसियन महिलाको हत्या गरी फरार भएका छन् । मलेसियाको पेनाङ राज्यका सहायक प्रहरी प्रमुख अनवर उमरका अनुसार २७ वर्षिय सदिप गुरुङ इन्डोनेसियन महिलाको हत्या गरी शव दराजमा लुकाएर भागेका हुन् । सदिपको नेपालको ठेगाना भने नखुलेका उमरले बताउनुभएको छ । पेनाङमा काम गर्ने सदिप र ती महिलाबीच प्रेम सम्बन्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ । तर हत्याको कारण भने खुलेको छैन । हत्या हुनुभन्दा दुई दिन अघिदेखि नै सदिप बिदा लिएर बसेका थिए । फरार रहेका उनको खोजी भइरहेको छ ।
बैङ्गलोरमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीले बाहिर पढ्न जान्रे विद्यार्थीलाई दिए यस्तो सुझाब
बैङ्गलोर– बैङ्गलोरसम्बन्धी जुन हौवा अहिले नेपालमा फिँजाइएको छ र प्रचारबाजी गरिएको छ, बैङ्गलोरको स्थिति त्योभन्दा धेरै भिन्न र दयनिय छ । बैङ्गलोर सोचेजस्तो सुविधासम्पन्न छैन र यो कुनै मेडिकल सिटी पनि होइन ।हावापानी र बसोबासका दृष्टिकोणले बैङ्गलोर राम्रो देखिए पनि नर्सिङ शिक्षाका लागि बैङ्गलोरलाई राम्रो मान्नसक्ने अवस्था छैन । नेपालमा दुई वर्ष प्राक्टिकल गर्दा त पोख्त हुन नसक्ने विद्यार्थीहरू बैङ्गलोरमा वार्षिक करिब २ महिना मात्रै प्राक्टिकल गरेर फर्कने अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरूको अवस्था के होला ? हामी सहजरूपमा अनुमान गर्न सक्छौँ । ‘पहिल्यै सोच्नुहोस् कि मैले प्राक्टिकल सिक्नेवाला छैन’ : सन्ध्या ढकाल बैङ्गलोरमै ४ वर्ष अध्ययन सकेर अहिले रजिस्ट्रेसन पाउनुपर्यो भन्दै लडाइँ गरिरहेकी गैरीगाउँ काठमाडौँकी सन्ध्या ढकाल भन्छिन्, ‘बैङ्गलोर पढ्न आउन खोजेको हो भने पहिल्यै सोच्नुहोस् कि मैले प्
Feb272018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सरकारले आफ्नो देशमा आउने नयाँ कामदारका लागि नयाँ नियम लागु गरेको छ। युएई सरकारले २०१८ फेब्रुअरी ४ देखि लागु हुनेगरी चालचलनको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गनु पर्ने नियम लागु गरेको हो। रोजगारीका लागि आउने अन्य देशका नागरिकका निम्ति असल आचरणको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने नियम बनाएको हो। नेपालीहरूले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट उक्त प्रमाणपत्र बनाउन सक्ने छन्। प्रमाणपत्र लिइसकेपश्चात कन्सुलर सेवा विभाग त्रिपुरेश्वर र काठमाडौं स्थित युएइको राजदूतावासबाट प्रमाणिकरण गरी युएइको सम्वन्धित निकायमा बुझाउन पर्ने छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल बाहेकको मुलुकहरुमा बसोबास गरेको भए तत्_तत् मुलुकबाट प्रहरी प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने र पाँच वर्ष भन्दा बढी युएईमा बसोबास भएमा युएईकै प्रहरी निकायले यस्तो प्रमाणपत्र उपल्ध गराउने नेपाली दूतावास युएईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जन
Feb242018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
स्याङ्जाको दरौं सिरुबारीका छविलाल दर्जीले युएईबाट घरमा पैसा पठाउँदा १२ लाख रुपैयाँ उपहार जित्नुभएको छ । आबुधाबीको अलजिमी मुसाफा मजदुर क्याम्प क्षेत्रबाट युएईको अल अहलिया एक्सचेन्ज मार्फत परिवारलाई पैसा पठाउँदा उहाँलाई उपहार स्वरुप १२ लाख रुपैयाँ बराबरको कार परेको हो । १६ सय ६० दिर्हाम अर्थात झण्डै ४७ हजार रुपैयाँ पठाउँदा उहाँले १२ लाख रुपैयाँ बराबरको कार जित्नुभएको हो ।गएको सोमबार आबुधाबीमा खोलिएको ‘लक्की ड्र’ अन्तर्गत दोस्रो कुपनमा छविलालको नाम परेको हो । कारको सट्टा उहाँले अहिले त्यो बापतको पैसा पाउनु हुनेछ । उहाँलाई उपहारमा निसानको सनी कार परेको छ । अहिले युएईमा यो कारको मूल्य झण्डै ४५ हजार दिर्हाम पर्छ । त्यसबाट लाग्ने कर बापतको रकम कटौती गरेर छविलालले झण्डै ४० हजार दिर्हाम अथवा झण्डै १२ लाख रुपैयाँ पाउने अल अहलिया एक्स्चेन्ज मार्फत युएईमा सेन्चुरी बैकको रिजनल प्रमुख प्रकाश पौ
Feb222018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
मलेसियाबाट फेरी आयो यस्तो दुख को खबर
मलेसिया । रोजगारीका लागि मलेसिया गएका एक नेपालीको मेसिन दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको छ। धनकुटा छथर तोखुवा ५ कार्कीटार निवासी टोक बहादुर लिम्बुका छोरा २८ वर्षीया गणेश निम्बुको निधन भएको मलेसियाबाट उनैसँग कार्यरत नेपाली खगेन्द्र खाजुम जिम्बुले जानकारी दिए। लिम्बु मलेसियाको पेनाङस्थित जि ब्रेसग्रेड प्रोडक्टस नामक कम्पनीमा कार्यरत थिए। सोमबार बिहान करिब ३ बजेतिर अचानक मेसिन दुर्घटनामा उनको निधन भएको हो। कम्पनीमा बिग्रेको प्राविधिक मेसिन मर्मत गर्ने क्रममा स्विच थिच्चिदा मेसिनमा बेरीएर लिम्बुको मृत्यु भएको उनैसँग कार्यरत नेपाली खगेन्द्रले जानकारी दिए। मृतक लिम्बु विगत ४ वर्षदेखि कम्पनीमा कार्यरत थिए। केही वर्षदेखि उनले उक्त कम्पनीमा लाइन लिडरको काम गर्दै आएका थिए। मेसिन मर्मत गर्दै गरेका लिम्बुको उनीसँगै काम गर्ने नेपालीले अचानक स्विच अन गर्दा मेसिनमै बेरिएर ज्यान गएको उनका सहयोगीहरुको आरोप
Feb202018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
सारा नेपालीलाई रुवाउने मलेशयाबाट आयो दुखद् खबर…
वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियामा दुई महिनामा ५४ नेपाली मजदुरको मृत्यु भएको छ। सन् २०१८ को दुई महिनामा यति धेरै संख्यामा नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन्। मृत्यु हुनेमा २२-४० वर्ष उमेर समूहका युवा छन्।क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासको तथ्यांकअनुसार जनवरीमा ३३ जना र फेब्रुअरीमा २१ जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा धेरै सुतिरहेकै बेला श्वासप्रश्वास बन्द हुनेको संख्या छ। सन् २०१८ को जनवरीमा भने सबैभन्दा धेरै करेन्ट लागेर, जलेर, ढलमा खसेर र कुटपिटमा परेर मर्नेको संख्या २१ छ। सात जनाले आत्महत्यामा ज्यान फालेका छन् भने सडक दुर्घटनामा परेर तीन र सुतेकै ठाउँमा श्वासप्रश्वास बन्द भएर मर्नेको संख्या दुई जना छ। यसैगरी, फेब्रुअरीमा सबैभन्दा धेरै अन्य शीर्षकमा मर्नेको संख्या १३ जना छ। श्वासप्रश्वास बन्द भएर, टीबी, निमोनियालगायत रोगका कारण पाँच जनाको ज्यान गएको छ। उद्योगमा काम गर्दा घा
Feb182018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
अनेक सपना बोकेर नेपाली युवाहरु अस्ट्रेलिया आउँछन, तर सोचेजस्तो छैन अष्ट्रेलिया
अस्ट्रेलिया यस्तो एउटा देश हो जहाँ हरेक कुनामा मनिसलाई चाहिने सम्पूर्ण सुबिधाहरु उपलब्ध छ। छेत्रफलको हिसाबले ठुलो तर जनसंख्याको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपाल भन्दा पनि कम रहेको यो देशमा अवसर सँगसँगै चुनौनीहरु पनि धेरै छन्। यहाँको गल्लि अनि सडकहरुमा विभिन्न देशबाट आएका मनिसहरु, विभिन्न सस्कृति मान्ने मनिसहरुको भीडमा नेपाली समुदायको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। त्यो मध्ये युवाहरुको आगमनको संख्या हेर्ने हो भने प्रतिदिन बढ्दो छ।नेपालबाट अनेक सपना बोकेर यो भूमिमा आउने गर्छन नेपाली युवाहरु। तर यहाँ आएपछिको संघर्ष भिन्न प्रकारको छ। भखर +२ पास गरेर आउने १८ वर्षका युवा पुस्ता होस् या २५ वर्षीय युवा नै किन नहोस्। यहाँको जीवनशैली उस्तै प्ररकारको भएता पनि आफ्नो आफ्नो जीवन संघर्षको कथा भिन्न भिन्न रहेको छ। नेपालमा बसेर हेर्ने अस्ट्रेलिया र यहाँको वास्तविकता आकाशपातालको अन्तर पाइन्नछ। जीवनशैली गुजा
काठमाडौँ, । कुल जनसंख्या बराबर पर्यटक भित्र्याएर आर्थिक गतिविधि तीव्र पारिरहेको मरिसस नेपाली कामदारका लागि राम्रो गन्तव्य हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ। रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पुगेका कामदार आर्थिक, शारीरिक शोषणमा पर्ने घटना बृद्धि भइरहेको बेला मरिसस आकर्षक गन्तव्य हुन सक्ने सम्भावना देखिए पनि सरकारी निकाय र मेनपावर व्यवसायीको प्राथमिकतामा यो देश पर्न सकेको छैन । निरन्तर बढिरहेको पर्यटक आगमनले मरिससमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भइरहेको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन् । पोर्टलुईसमा रेस्टुरेन्ट संचालन गरिरहेका सुन्दर सिंह पछिल्ला वर्षमा मोरिसरको बराबर नै संसारका विभिन्न मुलुकबाट पर्यटक आइरहेकाले पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको माग बढिरहेको बताउँछन् । पर्यटक संख्या बृद्धि हुँदै गइरहेको र प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि राम्रो भइरहेकाले मरिसस आउनेले रा
Feb122018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
के डिभी चिठ्ठा बन्द हुँदैछ? जानिराख्नुस् अमेरिकी आप्रवासन नीति र नयाँ आयाम
अमेरिका । डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकाको आप्रवासन कानुन र प्रावधानहरू व्यापक परिवर्तन आउनेक्रम र त्यसको चर्चाले सरोकारवालाहरू तरङ्गित छन् । सर्वाधिक चासोको प्रश्न छ– के डिभी चिठ्ठा बन्द होला ? आस्थायी संरक्षित स्थिति (टिपिएस) बारे कानुन र प्रकृया फेरिएको हो ? चेन माइग्रेशन (श्रृङखला प्रवास) को विद्यमान व्यवस्था कायमै रहला वा फेरिएला ? शरण निवेदन (असायलम) भरेकाहरूको सुनुवाइ बन्द हुने हो वा प्रकृया फेरिएको हो ? विद्यार्थी भिसा, पर्यटक भिसा, परिवार वा निकट व्यक्तिलाई स्पोन्सर गरेर अमेरिकामा ल्याउने लगायतका अमेरिकी आप्रवासन नियम कानुनबारे यतिबेला निकै चासो, बहस र भ्रमहरू छन् । सरोकारवाला सबैलाई अमेरिकी आप्रवासन सम्बन्धी कानुनी प्रावधान र अब हुनसक्ने सम्भावित फेरवदलबारे प्रष्ट जानकारी दिन सम्बन्धित विषय विज्ञसँग डीसी नेपालले भिडियो संवाद गरेको छ । इमिग्रेशन अटर्न
Feb102018 by नेपाल २४न्युजNo Comments
मलेसियाको एअरपोर्ट बाट आयो अहिले सम्म कै ठुलो दुखद खबर
मलेसिया एअरपोर्टमा एक नेपालीको बिजोक(५ दिन देखि भोकै), आफन्तजन सम्म पुर्याइ दिनु हुन अनुरोधनाम: मनोज बिश्ट घर बैतडी नेपाल उमेर १८/ १९ को एक जना भाइ मलेसिया एअरपोर्ट मा फेला परेको छ। यहाको पुलिसहरुले मलाइ सोधपुछ गर्न लगाउदा ..उ सङग पासपोर्ट बाहेक केही छैन हातमा।जोहरबारु कम्पनी बताउछ । बोसले एअरपोर्ट ल्यायी घर जा भनी छाडेको रे । मलेसिया एअरपोर्टमा एक नेपालीको बिजोक(५ दिन देखि भोकै), आफन्तजन सम्म पुर्याइ दिनु हुन अनुरोधनाम: मनोज बिश्ट घर बैतडी नेपाल उमेर १८/ १९ को एक जना भाइ मलेसिया एअरपोर्ट मा फेला परेको छ। यहाको पुलिसहरुले मलाइ सोधपुछ गर्न लगाउदा ..उ सङग पासपोर्ट बाहेक केही छैन हातमा।जोहरबारु कम्पनी बताउछ । बोसले एअरपोर्ट ल्यायी घर जा भनी छाडेको रे । source : chautari online